Carruur Soomaaliyeed oo wacdaro ka dhigay ciyaaraha Golfka ee lagu qabtay Dalka Mareykanka – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Carruur Soomaaliyeed oo wacdaro ka dhigay ciyaaraha Golfka ee lagu qabtay Dalka Mareykanka
By Aadan Sooyaal / August 31, 2020 August 31, 2020
USA-(SONNA)- Maxamed Cabdirashiid Ibraahim, Salma C/rashiid iyo Sihaam oo Walaalo ah ayaa wacdaro ka dhigay Ciyaaraha Golfka ee lagu qabtay Magaalada Portland Gobolka Oregon ee Dalka Maraykanka.
Ciyaartaan oo ay soo qaban-qaabisay Ururka da’yarta Golfta Qaaradda America ee American Junior Golf Association ayaa waxaa sannadkaan ka soo qayb-gallay 78 ciyaartooy oo ka kala socday daagfaha Adduunka da’adooduna u dhaxaysay 12-15,iyadoo Saddex ka mid ah ay ahaayeen Somali Americaan.
Sihaam Abdirashid oo ahayd Gabdha ugu da’da yareyd Ciyaartaan,horana guula uga soo hoyeysay Aasiya iyo Africa, iyadoo xiligaas matalaysay Dalkeena Soomaalia ayaa hadda gashay kaalinta 10-aad waxayna keentay 14 dhibcood,salma ayaa iyana gashay kaalinta 29-aad, halka Maxamed uu isna galay kaalinta 46-aad.
Cabdirashiid Ibraahim oo ah Aabbaha Carruurtan ayaa war-baahinta Qaranka Soomaaliyeed u sharraxay taariikhdiisa isboortiga, guulaha ay Carruurtiisu ka gaareen Ciyaaraha Golfka iyo waleba wakhtiga ay billaabeen, isagoo u mahad-celiyey cid kasta oo garab istaagtay, gaar’ahaan Wasiir khadiijo Maxamed Diiriye.
Siham, Salma iyo Maxamed ayaa u mahadceliyay dhammaan Jaaliyadda Soomaaliyeed eeDalka Maraykanka , Wasiirad Khadiijo Diiriye iyo intii kusoo garab istaagtay guushooda.